Waxaan bilaabeynaa Geo-Engineering - Wargeyska - Geofumadas
Juunyo, 2019 Geospatial - GIS, Engineering, tabo cusub
Waxaan ku faraxsanahay inaan ku dhawaaqno soo saarista majaladda Geo-injineerka ee dunida Hispanic. Waxay lahaan doontaa wareega quarterly, digital edition daabacaadda content multimedia, download ee pdf iyo version daabacan dhacdooyinka ugu weyn ee ay daboolayaan ay horjeeda.
Boggiisa dhexe wuxuu soo saaraa muuqaal muujinaya horumarka ereyada GIS, CAD, BIM in qaybta taariikheed ee taariikheed ay soo saaraan oo kaliya maaha isbeddelka heer jaangooynta maamulka xogta laakiin waxay matalayaan nambar caadi ah oo u horseedaya dib-u-habaynta qaababka ee loo yaqaan 'cilmiga dhulka,' oo sii kordhaya oo si ka baxsan. Falanqaynta muuqaalku waxay ku saleysantahay mideynta BIM + PLM qaab-dhismeedka wareegga afaraad ee warshadaha ee hadda la calaamadiyay xarfo kooban sida Digital Twins, SmartCities oo leh qaab hor leh oo halkii laga eegi lahaa meel fog oo hubaal ah oo aan hubeyno iyada oo aan ogaan iyo sidoo kale Waxay ka dhacday warshadaha Uber-Airbnb-style.
waxyaabaha kale ee ay ka tarjumaysaa isbeddellada Maamulka Land, ka mid ah taas oo soo jeediyay 2014 Cadastral ah, hadlo guulaha iyo caqabadaha weli daboolay duurka this kuwaas oo lagu daydo ee xaqiiqada dabiiciga ah lagu daydo oo isbadal ku milmaan doonaa keenay by aadanaha. -dhalan-rogga oo ku hamiyo Cadastre 2034 in ay hab user dhamaadka la door firfircoon ka warsiinta iyo xogta aan ollogga kaabayaasha in ay xiriir xuquuqda, mas'uuliyadaha iyo xayiraad ah si ay dadweynaha oo hoos hab farsamooyinka diiwaanka ayaa sidoo kale soo bandhigay iyo ma ahan oo keliya xiriirka da'ayeen.
Plex.Earth oo ah Lambros oo qoraal ah oo lagu tarjumay Isbaanish by Laura García ayaa inoo sheegaysa xalalka isku dhafan ee CAD-GIS ee baahida Machadka madaniga ah, laga soo eego taariikhda shakhsiga:
Ma jirin wax ikhtiyaar ah: waa inaan dib u casriyeynaa shaqada dhabta ah ee dhulalka, saameynaya ilaa ku dhowaad dhammaan rakibidda. Waxaan lumay agagaarka afar bilood, laakiin tirada naga yaabay: mashruuc ka mid ah 6 million of dollars, kharashka dib loo qiimeeyo ka badan $ 600.000 ...
Taasi waa markii aan bilaabay horumarinta qalabka qaar "Si fudud" si ay ula xiriiraan AutoCAD Google Earth, kaas oo muddo ah Waxay ahayd sirta - sirta - tartanka tartanka.
e-Cassini, aasaasaheeda ayaa na tusaya wareysi lala yeesho Shimonti Paul, sida xogta ka soo baxday shaashadda waa mid suurta gal ah in uu yahay mid dhab ah.
Muuqaalka sare ee LiDAR waa maanta loo yaqaan badiyaa by dadka isticmaala, oo aad u badan inta badan ka soo boodda aragtida farsamada in xoogaa yar oo xoogga la saaro dhibicda aragtida tayada, saxsanaan iyo sax Wali Sidaas darteed, caqabado badan ayaa dhaca marka la eego qadarin iyo dhammaystirnaanta Inta badan Sifee sharaxaad ka bixi Meelaha, ka weyn tirada dadka isticmaala iyo qiime dheeraad ah ee modelka ah ganacsiga
Marwalba waan ka walwalsanahay saxnimada xogta ay bixisay Google. Waxaa jiray Laba kiis oo suurtagal ah oo aan maanka ku hayo:
• Naqshad / fikrado horudhac ah oo cusubWaxaad tagtaa qaybo kala duwan.
• Helitaanka shaxanka sare ee warshadda falanqaynta boodhadhka leh HEC-RAS 2
Maqaal xiiso leh Nicolas Mangon, oo suurtagal ah in la isku xidho BIM ee ku xiran xaaladda AEC.
Marka aad muujiso sida isku xirnaanta, qayb kasta oo ka mid ah dhismaha dhismaha waxay hagaajinaysaa waxtarka, amniga iyo qiimaha, Xitaa ma noqon doonto su'aal ah in warshadaha waxay u dhaqaaqi doonaan jihadaas, laakiin sida ugu dhakhsaha badan.
Qeybtan mawduucan, majaladda waxaa ka mid ah warar ka yimid shirkadaha hormoodka ah ee warshadaha; AutoDesk, Bentley Systems, Esri, Topcon, Trimble, Kadaster, Hexagon iyo Microsoft.
Waxaan kugu martiqaadeynaa inaad ku raaxaysatid boggaga akhriska ah ee 60, halka daabacaada xiga ay tahay habeyn. Wixii wargeyska hadda waxaa la bixiyaa qaab dijital ah, adoo adeegsanaya adeegga daabacaadda iyo maraakiibta dalbashada ama qaab muuqaal ah oo dhacdooyin ah oo ay ka soo qayb galayaashu ka qaybqaataan.
Post Previous«Previous Sida ugu fiican ee BIM Summit 2019
Post Next Casriyeynta teknoolojiyada ee Geo-engineering - Juun 2019Next »